03/07/2018 - Page 3 sur 4 -
67Ha : Tra-tehaka ny basin’ireo jiolahy nifanenjehan’ny polisy
Basy poleta vita tanana iray no azon’ny polisy teny am-pelatanan’ny jiolahy mpanendaka miisa efatra, nifanenjehan’izy ireo teny 67Ha akaikin’ny hotely Rafia afakomaly tokony ho tamin’ny 10 ora alina tany ho any. Tafaporitsaka kosa ireo olon-dratsy …Tohiny
Taxi : Mbola hanjakan’ny sehatra tsy ara-dalàna
Mbola hanjakan’ny sehatra tsy ara-dalàna tanteraka ny taxi eto an-drenivohitra. Raha ny fanamarihana voaray, dia manodidina ny arivo any ireo “taxi clandestin” manao ny asan’ny taxi tena izy. Any amin’ny lalana Ankatso-Ambolokandrina no tena ahitana …Tohiny
Savorovoro tany Port Bérgé : Olona 30 nosamborin’ny zandary
Raikitra ny fifandonana nahery vaika tany an-tampon-tananan’I Port Bérgé , afak’omaly. Fokonolona an-jatony no fantatra fa nirohatra nisavorovoro sy nandravarava, nanoloana ny tranona zandary iray tany an-toerana. Raha ny vaovao voaray moa dia olona manodidina …Tohiny
Fanadinana Bakalorea : Nanomboka ny adina fanatanjahan-tena
Nanapan-kevitra ny hanohy ny asany ny mpampianatra aram-panatanjahan-tena any amin’ny faritra. Omaly araka ny fantatra no nanomboka ny adina fanatan-jahantena tany Toamasina, raha efa ny herinandro lasa teo kosa ny tany Toliara. Raha tsiahivina moa …Tohiny